Xanaaqa Hooyada Uurka leh dhibkan ayuu leeyahay!! (Aqriso Cilmi baaristan) « AYAAMO TV
Xanaaqa Hooyada Uurka leh dhibkan ayuu leeyahay!! (Aqriso Cilmi baaristan)
2030 Views Date February 2nd, 2014 time 11:28 am
Wargeyska Daily Mail ayaa Cilmi baarayaal Ingariis ah kasoo xigtay in Hab dhaqanka Carada wata ee ay Hooyada Uurka leh sameyso, uu saameyn xun ku reebayo Koriinka Wadnaha Ilmaha ay Hooyadu Caloosha ku siddo.
Dhaqamadan halista leh waxaa ka mid kara inay si awood ah Albaabka Guriga u xirto, Cod dheer ku qayliso, Saxan ama Agabka kale ee Guriga tuurto ama xitaa inay si Xad dhaaf ah Raashin u cunto.
Warbixinta waxaa lagu cadeeyay in Haweenka iyagoo Uur leh aad u carooda ay Caruurtoodu noqdaan kuwo inta badan Xanuunada Wadnaha qaba.
Isbedelada Hormooniga ah ee Jirka Hooyada Uurka leh ku dhaca oo inay Hab dhaqanka Carada leh sameyso ku kalifa ayaa waxay sii maraan Xididaha Hooyada Caloosheeda iyo Ilmaha isku xira ee Xundhurta la xiriira, sidaas ayeeyna toos ugu gudbaan Ilmaha yar.
Cilmi baaris arrintan lagu sameeyay ayaa waxay kulmisay 49 Hablo Uur leh oo Da’doodu u dhexeyso 22 illaa 39 jir.
Hablaha barista lagu sameeyay qaarkood ayaa la arkay in Ilmahooda kolka ay dhashaan uu Wadnuhoodu noqdo mid aanu Garaaciisu isbedeleen, arrintaas oo ah mid aan inta badan la arag.
Garaaca Wadnaha ayaa wuxuu u baahanyahay iisbedel si uu Duruufaha ula qabsado, tusaale ahaanna Xilliyada uu Qofku Ciyaaro sameynayo oo Garaacistu ay kordheyso.
Kooxda Al-Shabaab ayaa xirtay maamulaha shirkadda isgaarsiinta Hormuud ee degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe, Maxamuud Xaaji Salaad iyo 15 ka mid ah shaqaalaha shirkadda.
Sarkaal ka tirsan shirkadda isgaarsiinta Hormuud oo codsaday inaan la xusin magaciisa ayaa u sheegay Bar-kulan in xarigga shaqaalahooda uu yimid kaddib markii shirkadda Hormuud ay ku gacan-seyrtay bixinta lacag dhan $50,000 oo kooxda Al-Shabaab ay dalbatay in la siiyo.
Shaqaalaha ayaa xalay oo Sabti ahayd laga soo qab-qabtay guryahooda. Qaar kale oo ka tirsan shaqaalaha shirkadda ayaa ka badbaaday in la xiro kaddib markii ay ka carareen guryahooda ka hor inta aan tegin guryahooda.
Al-Shabaab ayaa sidoo kale jartay khadka isgaarsiinta ee shirkadda Hormuud ee gobollada Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose. Maalintii labaad, wax isgaarsiin ah kama jirto gobollada Jubbooyinka.
Magaalada Jilib ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaa yaalla hab-dhiska shirkadda Hormuud ee isku xira Muqdisho iyo gobollada Jubbooyinka, sidaas darteed tallaabadan ayaa saameyn ku yeelatay guud ahaan labada gobol.